नेपाल आज | बाढी पीडितलाई सरकारले केही गरेन : देउवा
बाढी पीडितलाई सरकारले केही गरेन : देउवा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बाढी, डुवान र पहिरो पीडितको उद्धार र राहतका लागि सरकारले केही नगरेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले पेश गरेको विशेष सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि भाग लिँदै सभापति देउवाले सरकार पीडितलाई राहत लिएर नपुगेको आरोप लगाउनुभयो ।
जनतालाई दुःख परेको बेलामा सरकारले तत्काल पुगेर काम गर्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र सरकार गम्भीर नदेखिएको उहाँको आरोप छ । बाढीको कारणबारे भारतलाई दोष दिएर नहुने भन्दै कुटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘‘मानिसहरुलाई न पाल दिएको छ न केही दिएको छ । पानी सुक्ला भनेर मानिसहरु बसेका छन् । पहाडमा पनि पहिरो गएको छ । तर सरकारले ध्यान दिएको छैन । जबकी यो सरकारको दायित्व हो । कर्तव्य हो । उसले दुःखमा हेर्ने हो । यस्तो बेला सरकार भनेको राज्य हो । राज्यले नहेरे कसले हेर्ने ? एउटा पार्टीले के कसरी हेर्ने ? ’’ देउवाको भनाई थियो ।
नेपालले भारतलाई दोष दिने र भारतले नेपाललाई दोष दिएर कतिदिनसम्म चल्ने भन्दै देउवाले बाढी डुबानबारे भारतीय पक्षसँग पनि कुटनीतिक तवरबाट कुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘‘ भारतसँग कुटनीतिक तवरबाट कुरा गरेर सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ । स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ होइन भने एक अर्कालाई दोष दिएर केही हुनेवाला छैन ।’’
देउवाले कोशी व्यारेज आसपास किनारामा बसेर सानोतिनो व्यापार व्यवसाय चलाएका नेपालीहरुलाई भारतले हटाउन खाजेको गुनासो नेपालीहरुलो आफूलाई गरेको भन्दै यसबारे पनि भारतीयसँग कुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘‘कोशी व्यारेज बसेसँगै झुप्रा बनाएर बसेकाहरुलाई सुरक्षाको कारण देखाएर भारतले हट भनेकाले यसबारे पनि कुटनीतिक कुरा गर्नुपर्छ ।’’ देउवाले बताउनुभयो ।
चुरेक्षेत्र विनाशबारे पनि सरकारले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । बालुवा बगाएर पुलजत्तिकै स्थानमा पुग्ने गरेकाले यसबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘‘सरकारले यसबारे खोजी गर्नुपर्नेमा कुनै मतलब सरकारले राखेको छैन । हवाइजहाजमा गएर जनताको दुः ख ठिक हुन्छ ?’’ देउवाको भनाइ थियो ।
यसमा कुनै राजनीति नगरिएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर नभए कांग्रेसले थप कदम उठाउने चेतावनी दिनुभयो ।